Palpalkokhabar.com | कसरी लेखियो युट्युबमा करोड कट्ने तीन गीत ?
कसरी लेखियो युट्युबमा करोड कट्ने तीन गीत ?
Posted on: August 11, 2017 | views: 452
काठमाडौं, २७ साउन २०७४– राजनराज सिवाकोटीले रचना गरेको तीनवटा गीत सुर्के थैली, पूर्वपश्चिम रेल र कुटुमा कुटु गीत विशेष चर्चामा रहे । यी तीनवटै गीतलाई युट्युबमा एक करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । सुर्के थैली युट्युबमा करोड पटक हेरिने पहिलो नेपाली गीत हो । गीत चल्नलाई शब्द नै शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गीतकार सिवाकोटीले यी तीन गीत कसरी रचना गरे त ?
सुर्के थैली खै...
०६२ सालतिर चरम युद्धको वेला थियो । त्यहीवेला मैले ‘वार्ता गराइदेऊ’ बोलको गीत बाहिर ल्याएको थिएँ । गीत निकै हिट पनि भयो । गीतमार्फत मैले शान्तिको कामना गर्दै देशको अवस्थालाई चित्रण गरेँ । संयोग भन्नुपर्छ त्यसको ठीक ९ दिनपछि आमहडताल सुरु भयो । आन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गर्‍यो र वार्ताको माध्यमबाट द्वन्द्वमा रहेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । मैले भन्न खोजेको के भने जहिले पनि म देशको परिस्थिति, राष्ट्रियता, सामाजिक परिवेश र संस्कृतिको संरक्षणका निम्ति गीत लेख्ने गर्छु । त्यसैको परिणाम हो, छक्का पञ्जा फिल्मको ‘सुर्के थैली खै’ गीत ।
आजभन्दा करिब एक दशकअघि मेरो दिमागमा सुर्के थैलीले ‘स्ट्रयाइक’ गरेको थियो । खासमा सुर्के थैलीसँगको मेरो अनुभव निकै रोचक पनि छ । सानो छँदा आमाले पटुकीमा सुर्के थैली राख्नुहुन्थ्यो र त्यसैमा पैसा राख्नुहुन्थ्यो । एकपटक आमाले घरमै राखेको सुर्के थैलीको पैसा चोरेँ, तर त्यसलाई बन्द गर्न जानिनँ । जबर्जस्ती गर्न खोज्दा सुर्के थैली नै च्यातियो । आमाले थाहा पाएपछि मैले नराम्ररी कुटाइ खाएँ । यस्ता घटनालाई सम्झिँदै गीत लेखेको हुँ ।
तर, त्यो गीत पूरा गर्न मलाई निकै समय लाग्यो । यतिसम्म कि गीतमा रौँ काटेर राख्ने वा ऊन काटेर भन्ने शब्द छनोट गर्न नै दुई–तीन महिना लागेको छ । म गीत रचना गर्दा प्रायः मेरो घरमाथिको जंगलमा पुग्ने गर्छु । त्यही जंगलमा बसेर नै मैले यो गीत सकाएको थिएँ । यही एउटा गीत पूरा गर्न मलाई पाँच वर्ष लाग्यो ।
गीत कम्प्लिट गरेपछि मिज्जु राजन निसानसँग बसेर एरेन्ज गरेँ । र, यसको रेकर्ड पनि गरेँ । यो गीतलाई एल्बममा राखेर निकाल्ने सोच बनाएको थिएँ । रेडियो नेपालमा पनि दिएँ । त्यहाँ पनि निकै रुचाइयो । तर, गीत चर्चित होला भन्ने सोचेकै थिइनँ । एक दिन दीपा दिदीले फोन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंसँग चलचित्रका लागि कुनै गीत छ भने उपलब्ध गराउनुपर्यो ।’ हामी मिटिङ बस्यौँ, यो गीतलाई नै उहाँहरूले मन पराउनुभयो । त्यसपछि केही शब्द हेरफेर गरेर पुनः रेकर्डिङ गर्‍यौँ ।
पूर्वपश्चिम रेलको पनि मैले साढे पाँच वर्षअघि नै कन्सेप्ट बनाएको थिएँ । त्यही फ्रेममा लामो समय लगाएर यो गीत रचना गरेको हुँ । म प्रायः पुरानै फ्रेममा काम गरिरहेको हुन्छु । अहिले मैले जति पनि गीतमा काम गरिरहेको छु, ती सबै पुरानै फ्रेमका हुन् । म आजको भोलि कहिल्यै पनि गीत रचना गर्दिनँ । म काठमाडौंमै बस्दा धारामा नुहाउन पुगेँ । त्यहाँ पानी थिएन र ट्यांकी हेरेँ । त्यो पनि रित्तै थियो । अनि मेलम्ची र रेललाई सम्झिएँः
काकाकुल झैँ भाको छ जिन्दगी
मेलम्चीको पानी, सुन्धारामा झरेको
सपना देखेँ मायालु मैले तिम्रो सिउँदो भरेको
त्यतिवेलै नेपाली र रेलको सपनालाई पनि सम्झिएँ ।
तिमी मैदान म फुलेँ भिरैमा
ओइलिन्छु कि परे म पिरैमा
त्यसपछि गीतलाई पूरा गर्नमैले लाखौँ, करोडौँपटक सम्झिएँ । विकासको अवधारणाबाट प्रेरित भएर मैले यो गीत रचना गर्न थालेँ । लामो समय लगाएर रचना गरेपछि वास्तवमै गीत राम्रो भएजस्तो लाग्यो र दुई–चारजना साथीलाई रेकर्ड गर्न भनेँ । तर, उहाँहरूले मान्नुभएन । त्यसपछि यो गीतलाई पनि मिज्जुसँग बसेर एरेन्ज गरियो र रेकर्ड पनि । पछि दीपक–दीपाले उसरी नै गीतको अफर गर्नुभयो । र, यही गीत मन पराउनुभयो ।
त्यसपछिको रेकर्डिङमा चाहिँ एउटा स्थायी नै चेन्ज गर्‍यौँ । त्यो किनभने सुन्धारामा मेलम्चीको पाइप बिछ्याउन सुरु भइसकेको थियो । लाग्यो मेलम्चीलाई अब किन सपना बनाउने ? त्यसपछि त्यो प्लटलाई काटेर थपेँ, ‘१,२,३,४,५’ गन्दै हिसाब गरेको सपना देखेँ मायालु ।’
कुटुमा कुटु सुपारी दाना...
कुटुमा कुटु गीतले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । तर, यो गीत पनि मैले पहिले नै रचना गरेको हुँ । विशेष त जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर यो गीत लेखेको थिएँ । रक्सी–चुरोटलाई विम्ब बनाएर गीत रचना गरेको थिएँ । यो गीत रचना गर्न पनि मलाई लामै समय लागेको थियो ।
यसको पहिलो लाइन मैले तीन वर्षअघि आफ्नै घरमाथिको जंगलमा रहेको मौवाको रूखको फेदमा बसेर लेख्न सुरु गरेको हुँ । मलाई गीत लेख्न मन लाग्यो भने त्यहीँ पुग्छु । त्यत्तिकै टहलिन त्यहाँ पुग्दा पनि कुनै न कुनै शब्द फुरिहाल्छन् । दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ र कोरी बाटी भन्ने दुईवटा लाइन मैले त्यहीँ लेखेको थिएँ । कुटुमा कुटु भन्नेचाहिँ धेरै पछि आएर थपेको हुँ ।
यो गीतमा प्रयोग भएका प्रायः शब्द वास्तविक र जीवनका भोगाइहरू छन् । ‘छिमेकी हुँ म बाघैको सन्तान काली नागैको’ लेख्नुको अर्थ म आफैँ पनि काली नागको सन्तान हुँ । र, अर्को कुरा डाँडावारि भन्ने मेरै गाउँको नाम हो । यसरी मैले पटक–पटक गरेर एक–एक शब्द थपी गीत तयार पारेको थिएँ । त्यो गीत तयार गर्दाताका नै ‘दुई रुपैयाँ’ चलचित्रका लागि गीत मागियो । बजारमा वास्तविक जीवन जगतसँग जोडिएको लोक प्रकृतिकै गीत चलेका कारण कुटुमा कुटु गीत नै उपलब्ध गराएँ । मैले सोचेअनुरूप नै यो गीत दर्शक–श्रोतामाझ लोकप्रिय बन्न पुग्यो । गज्जबबाट